Côte d’Ivoire: Manosihosy Ny Zon’ny Mpamorona Ny Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2012 9:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, Català, русский, Swahili, Español, Français
Hafa noho ny teo aloha ny fetin'ny faran'ny taona 2011 tao Côte d'Ivoire. Valo volana taorian'ny fiovam-pitondrana, te-hanamarika ny fiovana tamin'ny alalan'ny ravaka tsy fahita tao amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny fanomanana afomanga goavana ny 30 sy ny 31 desambra 2011 ny fitondrana. Maro ny Ivoariana no nivoaka nanararaotra nivoaka nijery ny fampisehoana isan-karazany izay ampian'ny teknolojia, samy naka sary fahatsiarovana ny tsirairay. Raha fotoana fanararaotra fakana traikefa ho an'ny mpankafy maka sary ny toy izany, dia tsy mba toy izany kosa ny nahazo an'i Audrey Carlalie. Ity mpianatra Anjerimanontolo Ivoariana ity, mpaka sary matihanina tsy miasa andro feno, dia nahita ny sariny momba ny afomanga navoakan'ny gazety Ivoariana, eny hatramin'ny vavahadin-tserasera Ivoariana lehibe indrindra aza nefa tsy naka alalana taminy akory.
Tsy nisalasala izy nitaraina tamin'ny alalan'ny tekelaka Facebook ary vetivety monja dia nampita tamin'ny bolongana sy ny tambajotran-tserasera hafa ny hafatra.
Mametrapetraka ny “ravaka” sy manazava ao amin'ny bolongany ilay ivoariana Edith Brou:
Eny tokoa, tsy nisalasala namoaka ny sariny tsy nisy firaharahiana, tsy nandefa na dia hafatra manokana tao amin'ny Facebook na Twitter (miserasera ao hatrany izy) aza ho fangatahana alalana, ny gazety ivoariana mpivoaka isan'andro tahaka ny le Jour plus, le Nouveau Réveil, Nord-Sud, l’Intelligent d’Abidjan ary tratra ihany koa hatramin'ny vavahadin-tserasera manantantara Abidjan.net aza .
Vantany vao nivoaka ny hafatr'i Edit Brou dia nampita ny raharaha ny tontolom-bolongana ivoariana tahaka an'i Yoyo mpamaham-bolongana vavy hafa iay izay namerina ny ny mpanao gazety ivoariana amin'ny tolony manokana miady ho amin'ny fanekena sy ny fanajana ny asany:
Misoritra tamin'ny fanehoan-dresaka hatry ny omaly ny fahadisoam-panantenana momba ny mpanao gazety an-tsoratra ivoariana. Ireo izay mihikiaka raha vao somary voantohina kely ny asany, no tsy misalasala akory manapa-dalana amin'ny fomba tsy dia mendrika loatra misintona ny asan'ny hafa
Tao anatin'izany fiaraha-mientana izany dia noforonina tao amin'ny twitter ny tenifototra #Carlaliegate hiadian-kevitra ary nihanaresaka ny fihetseham-po.
Pikantsary hevitra nivoaka momba ny #carlaliegate hita twitter
Ny mahavalalanina amin'ny ity raharaha ity dia tsy nahasahy niala tsiny ny gazety votonontonona. Ny tena loza dia niaro ny fihetsiny ny iray amin'ireo gazety ireo, L'intelligent d'Abidjan:
Ny zoma (30 desambra 2011) dia tany amin'ny Lapan'ny Kolontsaina ny mpaka sarin'ny l'IA (Intelligent d’Abidjan). Tsy manana aterineto eo akaiky ry zareo fa tsy maintsy niampita tetezana vao tonga ao amin'ny birao. Nikarokaroka tao amin'ny facebook ny mpandrafitra ny haibika ka nahita io sary io. Miala tsiny raha tsy nanonona ny mpaka sary fa noho ny sary mipetraka any amin'ny sehatra ikambanana sady tsy natao hahazoam-bola, dia tsy maintsy mandoa vola ve? Miala tsiny raha tsy nanonona ny mpaka sary. Hanao izany izahay amin'ny manaraka ary hitady ny fomba hivononan'ny mpaka sary kokoa.
Ho an'i Stephane Kouakou, mpiserasera mavitrika ao Côte d'Ivoire, manampy ny laza ratsy tadiavin'ny mpanao gazety ivoariana ifikirana izao raharaha izao:
Araka izay efa navoitrako tao amin'ny iray amin'ny lahatsoratro « Mauvaise presse », manana fomba ratsy mampanary mpividy-mpamaky azy ny haino aman-jery ao Côte d’ivoire. Mbola nanampy bala iray hafa itifirana ny tenany hanariana bebe kokoa ny fitokisana izay tsy ananany intsony indray izy izao.
Mbola maresaka dia maresaka ny raharaha ato amin'ny aterineto ary efa an-dalana ihany koa ny hetsika araka izay amehezan'i Yehni Djidji azy ao amin'ny hafany momba ity raharaha ity:
Nesorin'ny Abidjan.net tsotra izao tamin'ny vohikalany ny sariny.
Nanolotra tambiny tahaka izao ny L'intelligent d'Abidjan: avoaka miaraka amin'ny anarany indray mandeha ny sariny, ao anaty gazety fa tsy eo amin'ny fonony, fiaraha-miasa mba hanazoana tambiny ara-bola ny sary, fandefasana mandritra ny IRAY VOLANA, amin'ny kinova PDF ny gazety, ho an'i Carlalie. Nialoha izany, niresadresaka niveriverimberina tao amin'ny aterineto ny gazety ka mila voaboasana ireny, angamba amin'ny lahatsoratra manaraka.
Tsy afa-miteny ity raharaha ity intsony i Carlalie izay naka mpanolotsaina ara-pitsarana, fa tamin'ny fotoana farany nifampiresahako taminy dia tsy nanao na inona na inona ny gazety samihafa raha niezaka ny hifandray tamin'izy ireo izy.